Riwaayadii Sirta Dawacada – Rasaasa News
Riwaayadii Sirta Dawacada
May 28, 2011 ay weerar ku qabsan fadhiisimo ay leeyihiin ciidamada Ethiopia, dabadeedna ay ka soo furan maxaabiis ay ciidamadu saldhiga ku haysteen., Riwaayada Sirtii Dawacada, Yaa rumaysan baad u malaynaysaa in Kooxda Jwxo-shiil
Yaa rumaysan baad u malaynaysaa in Kooxda Jwxo-shiil, ay weerar ku qabsan fadhiisimo ay leeyihiin ciidamada Ethiopia, dabadeedna ay ka soo furan maxaabiis ay ciidamadu saldhiga ku haysteen.
Mase u malaynaysaa in ciidamada Ethiopia, ay u kas u dili shaqaale UN, oo ay gubi baabuurtii ay wateena, qaarna ay ku afduuban xero ciidan.
Hadalkaas, u malayn maayo in ay jirto cid rumaysan, oo ogg xaalada ka jirta geeskaAfrika. Waxaase laga yaabaa in kooxda Jwxo-shiil, qoraalada ay sameeyaan ugu talo galaan dad aan aduunka maanta joogin ama [undiscovered tribe in Amazon].
Riwaayadii Sirta Dawacada: Dambiile Jwxo-shiil, kolkii ay meel walba ka soo xidhantay, ayuu afar wiil oo jilibkiisa ah, qorshe u sameeyey ah in ay afduubaan dadka u shaqeeya UN-ta, si uu uga kabto kudka argagixisonimo ee la kor saaray.
May 13, 2011 kooxda Jwxo-shiil, waxay jidka u dhaxeeya Jijiga iyo Fiiq, isu taagtay laba Landcruiser oo safar ah oo u kiraysnaa hayada WFP. Halkaas oo ay ku dileen hal darawal, midna ay dhaawaceen, waxay gubeen labadii gaadhi, waxayna af duubteen laba ruux.
May 15, 2011 Jwxo-shiil, oo Internet-ka uun ka maqlay in waxyeelo dil ah ay ku dhacday dad u shaqeeya UN, ayaa inta aan wax laga sheegin cambaareeyey, waxyeelada loo gaystay shaqaalaha UN-ta. GKP, ka lug biximaysid kob uu kuu galba.
May 16, 2011 Jwxo-shiil, kolkii uu hubsaday in shaqaale UN-ta ah, ay kooxdiisu gacanta ku dhigtay, ayna fuliyeen qayb ka mid ah qorshaha bilowgiisii, ayuu qoraal micno daro ah ku soo qoray Internet-ka, oo yidhi “ciidamada Ethiopia waxay af duubeen shaqaale UN.” ku qiyaas,”Qumayo intaadan qumayo odhan bay qumayo ku tidhaa.”
May 17, 2011 Jwxo-shiil, mar labaad waxaa uu soo saaray qoraal kale oo micno daro ah oo leh “ciidamada Ethiopia waxay gumaadeen 100 ruux oo shacab ah.” Dadku ma mulacyadii Wartimiraa! miyuuna Ogayn in aan maanta aduunka waxba qarsoomi karin.
Waa intii uu ka doonayey Internet-ka wixii la qoraba qabsada, kaas oo baahiyey in Ethiopia iyo kooxda Jwxo-shiil, uu midba midka kale ku eedaynayo waxyeelo.
May 18, 2011 Kooxda Jwxo-shiil, waxay qortay war deg deg ah, oo ku saabsan dagaal ka dhacay Laasoole, oo ka tirsan gabalka Doolo. War been ah, balse dan iyo gogol xaadh leh!
May 26, 2011 Jwxo-shiil, waxaa uu soo qoray war deg deg ah, oo sheegaya in ay budhcadiisu weerar kula wareegtay saldhig wayn oo ay ciidamada Ethiopia ku leeyihiin Galaalshe. Waxayna ka soo furteen shaqaalihii WFP, oo sida ay sheegeen ay ciidamada Ethiopia hore u af duubteen. Subxaanalaah, gacan ku dhiiglenimadii iyo dambiyadii uu hore u galay miyuu beenta intan la egna ku darsaday!
Qoraal dheer oo afka Ingriisiga ku qoran, ayey kooxdiisu ku sheegtay in ay gacanta ku hayso labo ka tirsan shaqaalaha WFP, oo ay ka soo furteen xero ay ka qabsadeen ciidamada Ethiopia. “Loogow hadaad loogi looba jooge.”
Malahayga Jwxo-shiil, waxaa loo xaqiijiyey in labadii ruux ee shaqaalaha WFP, ee ay kooxdiisu Riwaayada ka samaysay in laga gudbiyey xadka Ehtiopia meel ay tahayba.
Jwxo-shiil, wuxuu haystaa fursad ku saabsan dadka ay kooxdiisu af duubtay ee ay xadka ka talaabisay. Waxaa ay xubnaha kooxdiisu fursad u heli in ay la xaajoodaan ergooyin UN-ta ah, ee goobay dadka afduuban.
Waxaynu la socon doonaa meesha ay gaadho riwaayada uu jilayo Jwxo-shiil, oo qirtay in uu hayo shaqaalahii la goobayey ee WFP.
Waxayse ceebi joogta, kolka uu kashifaad ka cabsado, ee dabadeedna dilo labada ruux, deedna yidhaahdo ciidamada Ethiopia dilay.